Ciyaar Siyaasadeed Cusub Mudaharaadka Sabdiga iyo Shirka Farmaajo ee Khamiista | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ciyaar Siyaasadeed Cusub Mudaharaadka Sabdiga iyo Shirka Farmaajo ee Khamiista
Tolw R-wasaare Rooble Maka kudbi doonaa imtixaanka adag ee uga yimid Madaxtooyada?
Farmaajo ayaa 4ta Maarso 2021 martigelinaya munaasabad lagu dhammeystirayo dadaalkii iyo wadahadalladii la xiriiray hirgelinta doorashooyinka dalka ee u dhexeeyey Dowladda Federaalka Soomaaliya, Dowlad Goboleedyada iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
Kulankan oo hal maalin soconaya sida ay madaxtooyada sheegtay wuxuu ku qabsoomayaa magaalada Muqdisho, waxaana looga gol leeyahay in lagu soo gabagabeeyo talooyinkii Guddiga Farsamada Doorashada ee ka soo baxay shirkii Baydhabo 15-16 Febaraayo 2021, kaasoo xal looga gaaray tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka ee 17kii Sebteembar 2020.
Hadaba Qoraalkan ayaa soobaxay saacad kadib markii uu hotelka Decale ku soo gabagaboobay kulan dhexmaray midawga
misharixiinta, Rw Rooble iyo maamulada qaar.
Natiijada kulanka ayaa umuuqata mid aanu jeclaysan Farmaajo, maadaama qodobada qaar ay ku noqdeen kuwo mucjiso ah sida:
Wasiirkiisa Amniga iyo Gud. G/Banaadir inay ka shaqeynayaan Banaanbax iyo ilaalinta shacab iyo madax sheegi doona wax kasta oo xun oo uu ku kacay FARMAAJO laguna soo bandhigi doono dhaliilahiisa Mudadii uu xilka hayay.
Rw Rooble ayaa labalamay musharixiinta khamiista 4bisha si ay uga wada shaqeeyaan habka maaraynta mudaaharaadka, hase ahaatee waxaa soodhacday warqad wiifto ah oo farmaajo soo tuuray si hawlihii uu waday Rooble loo wiiqo.
markan si toos ah ayuu u arki doonaa Rooble farsamooyinka iska daba wareega ah ee laga bartay Villa Soomaaliya.
Horay waxay u aaminsanaayeen Musharixiinta in Rooble hawshan aysan usahlanayn maadaama ay garanayaan cida kadanbeysa, laakiin Rooble ayaa ku adkaystay inuu dawrkiisa sharciga uu qaadan doono, isagoona heshiis lagalay musharixiinta.
Hadaba Waa imtixaan culus oo horyaala Rooble una baahan inuu si xeeladaysan uga gudbo, hadii ay ku adkaato waxaa dhici doonta in Rooble danbe aan wax ku saabsan doorasho lagala xaalin, iyadoo maalmihii ugu danbeeyay ay Beesha caalamka iyo siyaasiyiinta soomaalida ay wadeen inay Rooble ku qanciyaan in uu qaato kaalintiisa uuna meesha ka saaro hadalada aan wanaagsanayn ee suuqa ugalay.
Hadaba madhici doontaa in Midawga musharixiinta oo kulmaya galabta ay iyaguna waqtiga dibadbaxa soo hormariyaan si ay cabsida Banaanbax nacaybka farmaajo u xoojiyaan?
Previous articleMadaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday oo shir kale ku dhawaaqay
Next articleBooliska Norway oo gudaha u galay Labo Maqaaxi oo Somali leedahay
C/wali Gaas “ waa sharci daro muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka.
farmaajo oo dhambaal u diray Madaxweynaha dib loo doortay ee dalka...
Maxadweynaha mudo xileedkiisa uu dhamaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhambaal hambalyo ah u diray Madaxweynaha dalka àan walaalaha nahay Jabuuti oo...
Madaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday oo shir kale ku dhawaaqay
Mareykanka oo shegay inay tahay waqtigii ugu haboonaa ee...